तालिबानका रहस्यमयी प्रवक्ता सार्वजनिक, यस्तो छ बिश्वो चकित पार्ने भित्रि रहस्य — Imandarmedia.com
तालिबानका रहस्यमयी प्रवक्ता सार्वजनिक, यस्तो छ बिश्वो चकित पार्ने भित्रि रहस्य
एजेन्सी। अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिबानले बुधवार पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दा प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले सबैभन्दा धेरे बोले। सो ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले धेरै पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिए र शरिया कानुनका आधारमा महिलाहरूको हक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यो हेरिरहेका धेरै पत्रकारका लागि अर्को एउटा कुरा पनि महत्त्वपूर्ण थियो: उनीहरूले मुजाहिदको अनुहार पहिलो पटक देखिरहेका थिए। वर्षौँदेखि मुजाहिदले छायामा रहेर काम गरे र उनी फोनको अर्को तर्फको आवाज मात्रै थिए।
बीबीसीकी याल्दा हकिमले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि बोलिरहेका मुजाहिदले पहिलो प्रश्न नै महिला पत्रकारको लिँदा आफू छक्क परेको बताइन्। तालिबान प्रवक्ताले आफूहरूले भित्र वा बाहिर शत्रु नचाहेको बताउँदै मेलमिलापको कुरा गरे। तर हकिमले त्यो आवाज आफूले मुजाहिदबाट वर्षौँदेखि पाइरहेको सन्देशभन्दा निकै फरक रहेको बताइन्।
उनका केही सन्देशहरू चरम हुन्थे। कुनै पढ्दा लाग्थ्यो: ‘यो मानिस अमेरिकीको वा अफगान सरकारमा रहेको सबैको रगत पिउन चाहन्छ।’ तर आज उनी त्यहाँ बस्छन् र भन्छन्: कसैलाई पनि बदला लिइने छैन।
“वर्षौँसम्म उनले रक्त पिपासु विज्ञप्ति पठाए अनि अहिले अचानक शान्तिप्रिय भए? यो कुरा बुझ्न गाह्रो छ।”जुन कुर्सीमा बसेर मुजाहिदले बोले त्यो कुर्सीमा केही समय अगाडिसम्म दावा खान मेनापल बस्थे। मेनापल अफगानिस्तानको मिडिया केन्द्रका प्रमुख थिए जो यो महिनाको सुरुमा तालिबानद्वारा मारिए।
त्यो बेला मुजाहिदले हत्याको जिम्मेवारी लिँदै मेनापल “विशेष आक्रमणमा मारिएका” बताएका थिए। अन्य पत्रकारले पनि मुजाहिदको बारेमा ट्वीट गरे। बीबीसीका पत्रकार जोन सिम्पसनले उनलाई “तुलनात्मक रूपमा शान्त व्यक्ति” भने। सिम्पसनले लेखे: “तर उनले विश्वको डरलाई शान्त पार्न खोजिरहेका थिए र उनले तालिबान अभियानको एक पक्ष मात्रै बोले।
न्यूयोर्क टाइम्सका पत्रकार शारिफ हसनले ट्वीटमा लेखे: “मैले उनीसँग धेरै पटक फोनमा कुरा गरेको छु र एसएमएस गरेको छु। तर मैले उनको अनुहार देखेको यो पहिलो पटक हो।”वर्षौसम्म अनुहार नदेखिएका प्रवक्ता एक व्यक्ति हुन् कि धेरै जना भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो।
बीबीसीका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संवाददाता लिस डुसेटले सामाजिक सञ्जाल व्यापक हुनु अगाडिदेखि उनीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्नुपर्ने बेलामै उठेको बताइन्। केही व्यक्तिले बुधवार देखिएका प्रवक्ता त्यति लामो समयदेखि कुरा गरिरहेका हिसाबले कम उमेरका देखिएको बताएका छन्।
“वर्षौँसम्म यो नामै नक्कली नाम भएको र पालैपालो बोल्ने थुप्रै जबिहुल्लाहहरू भएको अनुमान थियो। अहिले हामी सबैले यी व्यक्तिलाई नै जबिहुल्लाह मुजाहिद हो भन्ने मानेका छौँ। तर उनी नहुन पनि सक्छन्?” डुसेटले भनिन्।
हकिमले यो रहस्य राख्ने काम तालिबानले गर्ने गरेको बताइन्। “तालिबान यही हुन्। उनीहरू सङ्गठित छन् र कुनै पनि कुरा अचानक हुँदैन। एक व्यक्तिका बारेमा रहस्य बनाउने र अचानक उसलाई क्यामराअगाडि ल्याउने – योभन्दा राम्रो कथा बन्नै सक्दैन।”
तर जे भए पनि उनको शब्दले आफूलाई चिन्तित तुल्याएको हकिम बताउँछिन्।”शरिया कानुनको कुरो – त्यसले मलाई त्रसित बनायो,” उनले भनिन्। “उनीहरूले अहिलेसम्म त्यो कस्तो हुन्छ भनेका छैनन्।”
“तालिबानको गुण नै यही हो: उनीहरू भ्रामक कुरा गर्छन्, उनीहरू मोहक देखिन्छन्, उनीहरूलाई कसरी सही शब्द प्रयोग गर्ने थाहा छ तर उनीहरूलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा कहिल्यै स्पष्ट हुन सकिन्न,” उनी भन्छिन्। “धेरै कुरा रहस्यमयी छ, तर के हामी साँच्चै जान्दछौँ उनीहरू को हुन्?
अफगानिस्तान युद्धः डब्ल्यूएफपीकी उप्रप्रमुख भन्छिन्, ‘देश निकै ठूलो र गम्भीर मानवीय सङ्कटमा’
दुई दशकपछि अफगानिस्तानमा तालिबान समूह पुनः शक्तिमा आएसँगै त्यहाँ उत्पन्न सङ्कटलाई लिएर विश्वभरिबाट चासो व्यक्त भइरहेको छ।पछिल्लो सङ्घर्षका कारण मानिसहरू विस्थापित हुँदा चुनौती थपिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकायहरूले जनाएका छन्।
तिनीहरूका अनुसार राजधानी काबुलमै ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापितहरू आइपुगेका छन्। यसै सेरोफेरोमा बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले काबुलस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम, अफगानिस्तानकी उपप्रमुख शावे लीसँग कुराकानी गरेका छन्।
बीबीसी: अफगानिस्तानको अहिलेको अवस्था के छ?
शावे ली: अहिलेको अवस्था एकदमै तरल छ, एकदमै अनिश्चितताको अवस्था छ र यो काबुलको हकमा मात्रै होइन। तर यो अवस्थामा पनि देशको अधिकांश क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच छ र पहुँच कायम गर्न सकिरहेका छौँ। देशभरि हामीले हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न लगायतका सहयोग पुर्‍याउन सकिरहेका छौँ।
के सहायता चाहिने नागरिकहरूसम्म पुग्न विश्व खाद्य कार्यक्रमले अवरोधहरूको सामना गर्न परिरहेको छ?
चुनौतीहरू छन्। केही अवरोध हुन सक्छन् जसलाई हामीले चिर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी चुनौती छन्। हामीले प्रयास जारी राखेका छौँ र अघि मैले भनेझैँ लडाइँ भएका ठाउँका मानिससम्म पनि पुग्न सकिरहेका छौँ।
त्यसका लागि निरन्तर सामान जुटाइरहनुपर्‍यो र मानिसहरूसम्म पुर्‍याइरहनुपर्‍यो। अहिले हामीले हेरिरहेको एउटा कुरा यो वर्षको बाँकी समयका लागि अफगान नागरिकको सहयोगका निम्ति विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई २० करोड डलर आवश्यक पर्नेछ।
उदाहरणका लागि विस्थापितहरू जम्मा भएका काबुलमा अहिले जस्तो विपद्‌को अवस्था छ सहायता सामग्री विवरण गर्ने स्थानहरूमा समस्या देखिन सक्छ। अरू अवरोधको कुरा गर्नुपर्दा सीमानाका भएर सहायता सामग्री ल्याउने कुरा हुन सक्छ। हामीले भन्सारसम्बन्धी प्रक्रियामा सहजताका लागि आवश्यक काम गरिरहेका छौँ ताकि आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
अफगानिस्तानमा उत्पन्न मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति तपाईँहरूले के गर्न लाग्नुभएको छ
निश्चित रूपमा हामी यही रहेर सहयोग गरिरहनेछौँ। सहयोग चाहिएका मानिसहरूलाई सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने कामलाई हामीले जारी राख्नेछौँ। सहयोग चाहिने मानिसहरूको पक्षमा वकालत गर्ने कामलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। त्यसमा स्रोतमा पहुँचको कुरा, सहायता सामग्री र सेवामा सुरक्षित पहुँचको विषय पर्छन्।
अहिले प्रत्येक तीनमध्ये एकजना अर्थात्‌ करिब एक करोड ४० लाख मानिसले भोकमरीको सामना गर्नु परेको छ। बीस लाख बालबालिका कुपोषणको मारमा छन्।त्यस्तो हुनुको पछाडि दुई वर्षदेखि अफगानिस्तानले झेल्नु परेको खडेरी, सामाजिक-आर्थिक चुनौती, कोभिड-१९ का कारण भएको महँगी र अन्य विविध पक्ष छन्।
त्यसमा सबैभन्दा प्रमुख कारण असुरक्षा रहेको छ। र, यी सबैले अन्त्यमा खाद्यान्न असुरक्षा निम्त्याउने हुन्। जुन बेला सहायताको आवश्यकता पर्छ त्यही बेला उपलब्ध गराउनका लागि हामी धेरै योजना बनाउँछौँ। र, जाडो महिना शुरू हुँदै गर्दा सडक बन्द हुनुअघि नै खाद्य सामग्रीहरू कतिपय स्थानमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।
त्यसकारण खाद्य सामग्री समयमै पुर्‍याउने विषयमा आवश्यक पर्ने संसाधनहरू हाम्रा लागि निकै संवेदनशील छन्। ग्रामीण क्षेत्रका मानिसमा खडेरीको व्यापक प्रभाव परेको छ। मानिसहरूले आफ्नो जीविका चलाउन पाइरहेका छैनन्। शहरी क्षेत्रका मानिसहरू असुरक्षित महसुस गरेकाले उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिरहेका छैनन्।
हामी जस्तै धेरै बजार महँगीबाट पनि प्रभावित भएका छौँ जुन कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमध्ये एक हो। यी सबैले शहरी जनसङ्ख्यामा व्यापक प्रभाव पारेको छ।
तालिबानले सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै विस्थापित भएकाहरूको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूको खानपानको प्रबन्ध कसरी मिलाइएको छ?
पछिल्लो सङ्कटका कारण चार लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। र, डब्ल्यूएफपीले उनीहरूलाई देशैभरि सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ।उदाहरणका लागि काबुलमा पछिल्लो हप्ता १० दिनमा थुप्रै मानिस आइपुगेका छन् र डबल्यूएफपीले उनीहरूको सहायता गरिरहेको छ।
यति बेला हामीले १,२०० घरपरिवारलाई सहायता गरिरहेका छौँ जसमा झन्डै आठदेखि नौ हजार मानिस छन्। महिला र बालबालिका धेरैजसो अवस्थामा बढी जोखिममा हुन्छन्। उनीहरूमा व्यापक प्रभाव परेको छ र हामीले उनीहरूको आत्मसम्मान र सुरक्षामा प्रभाव नपर्नेगरी सहयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।
हामीले निकै ठूलो र गम्भीर मानवीय सङ्कट भोगिरहेका छौँ। किनभने आवश्यकताको तह निकै बढी छ। पछिल्लो महिनामा देशैभरि देखिएको तनाव मात्रै नभएर खडेरी, जुलाई महिनाको अन्तिमतिर देखिएको आकस्मिक बाढी जसमा हामीले हप्ता दिनमै सहायता पुर्‍याउन सफल भएका छौँ। यस्ता कैयौँ कारणले यहाँ समस्या परेको छ।
पक्कै पनि हामीलाई थप स्रोतको आवश्यकता छ। मैले पहिले पनि भने हामीलाई यो वर्षभरि सहायता पुर्‍याउनका लागि आवश्यकता पर्ने २० करोड डलरको कमी छ। र, त्यो सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। यो नभए हामीले समयमै वा आवश्यकताबमोजिम खाद्य सामग्री पुर्‍याउन सक्नेछैनौँ।